Nin loo xirey denbi uusan gelin oo dalbadey magdhowgii ugu badnaa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Тюремная камера. Фото: Kristiansstads kommun/flickr.com
Nin loo xirey denbi uusan gelin oo dalbadey magdhowgii ugu badnaa
La daabacay måndag 10 november 2014 kl 16.59
Nin 66 sanno jir ah oo ka soo jeeda magaalada Västerås ayaa xabsiga laga soo daayey bishii abriil ka dib markii xabsi ugu jirey denbi uusan gelin muddo toban sanno ah. Waxaana lagu xukumay in uu kufsi naxariis daro ah u geystey gabadh uu dhalay. Imminka ayaa ninkan ka dalbanaya dowladda magow dhowgii ugu badnaa abid.
Moagdhowgii ugu badnaa ee horey loo baxiyey waddanak Sweden ayaa ahaa 10,2 milyoon oo karoon. Magdhowgaas waxaa la siiyey nin la oran jirey Joy Rahman oo muddo sideed sanno ah u xirnaa dil uusan geysanin.
Ninka reer Västarås ee horey loogu xukumay in uu geystey faldenbiyeed kufsi waxaa xabsiga laga soo daayey ka dib markii kiiskiisa ay u kuurgashay maxkmadda sare. Waxuuna imminkana ka dalbanayaa dowladda Sweden in ay siiso magdhow dhan 19 milyan oo karoon. Qareenka ninka ayaa sheegay in lacagtaan u qaybsan tahay dakhligii ninkan soo geli lahaa ee ka beerdaroobey inta uu xabsiga ku jirey iyo meel ka dhacii loo geystey. Halka meel ka dhaca lagu qiimeeyey 15 milyan oo karoon.
– Xaq ayuu u leeyahay middas sida uu dhigayo xeerka ka jira Sweden, ayuu yeri qareenka ninkan, Tomas Olsson. Waa meel ka dhac intaas oo sanno in ruuxa nolashiisa waayo.
Ninkan 66 sanno jrika waxaa maxkamada heerka koobad ku xukuntay xabsi sannadkii 2002, xukunkan ayaa la xiriirey eedeymo ahaa in ninkaan uu u geystey gabadh uu dhaley kufsiyo naxariis daro ah boqolaal goor muddo todobo sanno ah iyo in uu gabdha sakiin uga jeexay candhada.
Gabadha ayaa xilligaas da’deeda u dhaxeysey 9-16 sanno jir.